Ibhotela ibhekile yindoda engokwemvelo ephuma kwimifuno. Ioli inamagama amaninzi-ibhotela ye-shea, ibhotela ye-shea, ibhotela ye-shea. I-oyile ayinamagama amaninzi kuphela, kodwa neenzuzo ezininzi. Ukuthandwa kakhulu kweoli efunyenwe kwintsimi yezonyango. Isetyenziswe ngokubanzi njengesithako esiphuthumayo, esilungisayo seemveliso ezihlukeneyo, ukusuka kwisepha kunye nokungapheli ngeibhola zeenwele. Ibhotela ibhekwe ngumbala wendlovu nge-yellow tinge. Abaphathi be-West Africa bayakuvuyela ukusebenzisa ibhotela ye-shea njengeoli yokupheka ekuphekeni. Kwaye ezinye iinkampani ezenza iilekese zithatha indawo yebhotile yecocoa kunye nebhotela. Kule nqaku siza kuthetha ngeempawu zebhattile ze-shea kunye nendlela yokukhetha ngokuchanekileyo.
Uphi ukhula lukhula?
Uncwadi lwezenzululwazi lubonisa ukuba umthi we-shea ubizwa ngokuthi i-Vitellaria, i-Vitellaria Nilotica (eMpuma Afrika), okanye i-Vitellaria Paradoxa (eNtshona Afrika). Iindawo ezikhulu kunazo zonke zaseCameroon, eMali, eNigeria, eCongo, eBurkina Faso, eSinegal nase-Uganda. Ukuphakama kwesi sityalo kunokufikelela kwiimitha ezili-15, i-trunk kunye namagatsha ahlanganiswa ngento ebomvu ekhusela imithi evela emlilweni. Umthi uqala ukuvelisa isiqhamo kwiminyaka engamashumi amabini. Izivuno zingaba ngamawaka amabini amabini.
Iziqhamo-izantyambo zomthi we-karite-olu lu buncwane obaluleke kakhulu kunabo bonke abantu baseAfrika, kuba akukho mveliso ekhethekileyo yemfuyo yendalo. Izizwe zaseAfrika ziqokelela iziqhamo ezivela kumaxesha amandulo, apho kwifomu yazo yasekuqaleni zifana ne-plums ezinkulu. Inyama egubungela amanqatha kukuphatha izilwanyana kunye nabantu. Abantu baseAfrika bayayiqonda yonke into kule mveliso: imithi engatheli iziqhamo, ukusika, ukumiswa, ukutshiswa kunye nomlotha kusetyenziswa ukupenda umgca kumbala omnyama, kwaye ukukhishwa kweengcambu zalo mthi kusetyenziselwa ukulungiselela isiselo sonyango.
Kule mithi kukho iintlobo zezibungu, ezibhekwa njengento epholileyo. Iziqhamo zomthi we-shea zixabisa ubungcwele, zifanekisela ubomi, inhlanhla kunye nokuzala. Iintlobo ze-karite ziyisipho esona sisona sikhulu kwaye sisebenze njengento ephangaleleyo xa kukho nawuphi na umthendeleko. Ubhontshisi beShea buveliswa eMpuma naseNtshona-Afrika. Ukusuka empuma, ioli ithathwa njengeqhumiso kwaye ilungile, kodwa inamafutha angaphantsi.
Izindlela zokufumana ibhotela ye-shea
Kwiminyaka emininzi, indlela yokukhipha ioli ye-shi iye yazingatshintshi. Ngokwesiko, abafazi bahlanganyela ekuvuneni. Bahlambulula isiqhamo, basasaze ilanga ukuze banciphise i-pulp, baze bayidle. Iibhondi zezithelo, iinantongomane, zihlanjululwe, zihlanjwe zihlulwe. Emva kokumisa okwesibini, iinantambo ziphantsi kwezigulana zesandla, kunye nomgubo uthululwa kwiivati ​​ezinkulu ezizaliswe ngamanzi ashushu.
Lo mxube ugxininiswa rhoqo, kwaye ioli iphakama phezulu. Emva koko kukho amanzi anobandayo kunye namafutha omdaka obunobumba obomvu. Le mafutha aqokelelwa. Emva koko iyakhutshwa kwipani enkulu yokucima, kunye nakwisixhobo sokugqibela. Ioli eyenziwe e-karite, eyenziwe ngumbala onobuhle, ixutywe kwiindiza ezikhethekileyo. Ezinye zezi zinto zihlala zifuna iimfuno zangaphakathi, kwaye ezinye zithunyelwa "kwihlabathi elikhulu".
Iimpahla ze-Shea Butter
Ibhotela ibhekile. Oku akushiyi i-greasy. Ithobisa ngokucacileyo ulusu kunye neenwele. Iimveliso ezikhethekileyo, ezimalunga ne-15% yeoli, zifaka isandla kwimveliso yendalo ye-collagen. Oku kuthetha ukuba iimveliso kunye nebhotela ye-shea ekwakhekeni kuhlaziywa ngokugqibeleleyo nokuphulukisa isikhumba.
Ioli ye-Karite yintlupheko yemvelo yomswakama we-ultraviolet (inqobo yemvelo ye-SPF 6), inyuse iipropati zokukhusela zesikhumba. Ngenxa yokuba ibhotela ibonisa ukuba umswakama ococekileyo ulusu kwaye uyondla, uyasetyenziswa ngempumelelo njenge-moisturizer.
Ubungqina be-shea obulungileyo bunceda nge-eczema. isikhumba esomileyo, kunye nokutshisa, ukuphatha i-post acne kunye ne-acne. Ibhotela ibhekile ngokufanelekileyo njenge-cream cream, kunye nalabo abanama-curls, ibhotela ye-shea, banokudibanisa kalula iinwele.
Indlela yokukhetha ibhotela ye-shea
Leoli ayinakukwazi ukuyenza. Kodwa kufuneka uqaphele. Qaphela ukuba xa ukongeza i-hexane okanye ezinye i-solvents kwioli, akukho bani unikezela isiqinisekiso sokuba kuya kuba neepropati ezilindeleke kuzo.
Abantu abaninzi bavumba ioli iyanelisa. I-nuzel encane. Ukuba ioli ayifumananga, oko kungathetha ukuba ikhulile kwaye ayinayo iipropati ezixhamlayo, okanye i-solvents ezikhankanywe ngasentla zongezwe kwioli. Emva koko ioli inokuba nombala ococekileyo omhlophe. Kodwa nangaliphi na izinga "lokuguga" ibhotela ibinayo iphunga elimnandi. Ukuba oku kubakho, oku kuthetha ukuba kukho izibonelelo ezingaphandle. Akuyimfuneko ukuyigcina kwisifriji. Ubhontshisi beShea bugcinwe ngokupheleleyo iminyaka engama-2-3 endaweni. apho kungekho ukufikelela elangeni kwaye kukho ukupholisa.
Ukuba ukhetha i-oyile kungekhona kwimo yayo ecocekileyo, kodwa ekuqulunqweni kweendlela zokuziqhenqa, kufuneka ubeke ingqwalasela kwixesha elinjalo: xa ubonisa ukubunjwa, ibhotela ibhetele ibe yindawo yokuqala, mhlawumbi yinto nje yokuthengiswa kwabavelisi bezandiso.
Kwakhona qwalela ingqalelo kwinkampani yokukhiqiza: kufuneka ithembeke kwaye ithembeke. Ukongezelela, i-shea encinci kufuneka ibe yinto ebalulekileyo kwimveliso yokonkcenkcesha, ngaphandle koko ininzi yezibonelelo ezixhamlayo zeoli ziya kugxinwa ngabakhuphiswano.
Hlalani nikhumbule ukuba iimpahla ezinjalo zononophelo kunye ne-pharmacological ziphathwe yi-bhotela ye-shea kuphela kwifomu ecocekileyo, elungiselelwe ngokwe-teknoloji yamandulo ngabahlali baseAfrika. Nakuphi na ukuphazamiseka kwimveliso yalo okanye i-mix mix of other components kubangela ukuba ioli ijika ibe ngamafutha amanqatha.
Ngaba kunokwenzeka ukulahla ingxolo ezindlebeni?
Indlela yokunika i-arthritis ifanelekile
Umphumo we-vitamin P kwimisebenzi eyintloko emzimbeni
Kwiziphi izifo i-buckthorn yolwandle iluncedo?
Iipropati zokuphilisa ii-cherries
Imbali yokudala i-skirt encinane
Ukuphila okunempilo: ukufaneleka kwe-aerobics
Indlela yokukhetha i-home inhaler yomntwana
Umtshato kwisitayela se-Chicago 30-ies
I-Aspirin ikhusela ukuguga kwangaphambili
I-TOP-3 yesikhonkwane esingcono kakhulu iphosa i-ruble engama-350
Abasetyhini abakhetha ukugqithisa ngokugqithiseleyo kwimpahla banelungelo lokukhetha
Umculi uYolka wenza ukuvuma okungalindelekanga
I-cocktail ye-Classic kunye ne-champagne
Ukwahlukana: ukutshatyalaliswa komyeni wakhe
Itiyi eluhlaza kunye nephilileyo